Beach Holidays By Train In Belzika | Save A Train
Home > Travel Europe > Beach Holidays By Train In Belzika
(Last Nohavaozina: 02/10/2020)
Fa firenena kely, Belzika manana ny anjara ara-drariny ny faran 'izay tsara lamasinina nivezivezy maro ny fahitana mahafinaritra ny mahita. Ny morontsiraka Belza no fomba lehibe haka aina sy hankafy ny masoandro sy ny 65 kilaometatra ny morontsiraka, maro ireo fiaraha-mientana mahafinaritra amoron-dranomasina mba po amin'ny. Makà fiatoana tanteraka ary misambotra ny fiaran-dalamby ny toerana ny safidy. Ireto ny sasany amin'ireo tsara indrindra Beach fety lamasinina any Belzika.
Raha mitady ny andro mety hahatongavana any amoron-dranomasina ianao dia izao no toerana hitsidihana. Fantatra koa amin'ny hoe ny "City tao amin'ny Ranomasina", Ostend Maherin'ny 9 kilaometatra torapasika tsara tarehy vonona ho sunbathing. Misy ihany koa ny lehibe Toerana fitsangantsanganana sy isan-karazany tranombakoka, fivarotana, ary trano fisakafoanana tao an-tanàna. From 28 Jona mandra- 31 Aogositra isan-taona Ostend mitana miaramilany, ho any amin'ny Sand Sculpture Festival izay betsaka mahafinaritra! afa-tsy fohy fiaran-dalamby avy any Brussels mitaingina, Ostend tanteraka ny tora-pasika-tanàna traikefa.
Bruxelles ho Ostend Lamasinina
Antwerp ho Ostend Lamasinina
Amsterdam ho Ostend Lamasinina
Bruges ho Ostend Lamasinina
Raha mitsambikina eo amin'ny fiaran-dalamby tao Brussels dia hahita ny tenanao amin'ny Knokke-Heist manodidina 50 minitra taty aoriana. Eto tsy misy iray monja, fa 5 lovely tora-pasika miandry anao. Amin'io faritra io dia manana zavatra ho an'ny olona rehetra, Mazava ho azy fa ao anatin'izany ny Golf, kanto lalan-, ny Casino, ivon-kolontsaina sy an tahiry voajanahary tsy mampino niantso ny Zwin. Miaraka izany zavatra be izany mba hanao izany dia tokony mandray tora-pasika fialan-tsasatra.
Bruxelles ny Knokke-Heist Lamasinina
Antwerp ny Knokke-Heist Lamasinina
Amsterdam ho Knokke-Heist Lamasinina
Bruges ho Knokke Lamasinina
Ho an'ireo izay sahisahy kokoa, De Hann ala nenina no safidy lehibe. Fohy ihany mitaingina fiaran-dalamby avy any Brussels, io tanàna amoron'ny ranomasina mahatalanjona manome ny masoandro beachfront amin'ny fizarana seza sy ny tsy miankina ny tora-pasika misy for rent, ary koa mahafatifaty Anglo-Norman fomba zohy fialofan'ny sy raitra. Azo atao ny hofan-trano bisikileta sy ny tsingerin'ny eny an-dalana na ny lalana amoron-tsiraka sy ny mankafy ny toerana manodidina ary masira rivotra. Fa ny ivelan'ny trano traikefa, izany no ny toerana tonga lafatra.
Ghent ho Ostend Lamasinina
Charleroi ho Ostend Lamasinina
Lille ho Ostend Lamasinina
Liege ho Ostend Lamasinina
Izany dia tsy maintsy ho farany Belzika tora-pasika ao amin'ny toerana ho an'ny sasany family fahafinaretana. Fanta-daza noho ny maro be rano fanatanjahan-tena toy ny paddling sy ny filomanosana, sambo fitsangatsanganana, mandeha sambo, trondro, carting ahevaheva sy ny hilalao onja, ary koa ny toerana fialam-boly maro nanaraka ny moron-dranomasina sy ny fifamoivoizana-maimaim-poana Toerana fitsangantsanganana, Nieuwpoort manolotra zavatra ho an'ny olona rehetra. Ity tanàna ity no mora ny miditra avy any Bruxelles ary fohy mitaingina fiaran-dalamby hahazo anao any.
Belzika manana mahatalanjona morontsiraka sy ny mora fidirana amin'ny fiaran-dalamby mahatonga mahazo teo ny rehetra Mahafinaritra sy Mahasoa Kokoa ny adin-tsaina-maimaim-poana! Misy toerana amoron-dranomasina mba hifanaraka foana ny olon-drehetra sy ny zava-baovao hanandrana. Inona no mety ho mahafinaritra kokoa noho ny iray amin'ireo tora-pasika fety lamasinina any Belzika?
Ghent an'i De Panne Lamasinina
Charleroi an'i De Panne Lamasinina
Bruxelles ho De Panne Lamasinina
Liege an'i De Panne Lamasinina
Beach Holidays By Train In Belzika Summary
Mandehana any amin'ny Saveatrain.com izay hijery tsara rehetra manjo ny fiarandalamby manokana ary manomboka mieritreritra ny traikefa nahafinaritra manaraka!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeach-holidays-by-train-in-belgium%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#tora-pasika fialan-tsasatra travelbelgium